नबिल बैंकद्वारा कोरोना कोषलाई ६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण Bizshala -
नबिल बैंकद्वारा कोरोना कोषलाई ६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण
काठमाण्डौ । नबिल बैंकले नेपाल सरकारको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि खडा गरिएको कोषमा ६ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले सो रकमको चेक अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरे । उक्त कार्यक्रममा बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका सञ्योजक निर्वाण चौधरीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
उक्त समारोहमा शाहले भने, “नबिल बैंकले नेपालमा कोरोना भाइरस महामारीका प्रभावहरू विरुद्ध लड्न नेपाल सरकारको प्रयासमा योगदान पु¥याउन पाउनु ठूलो सम्मान हो । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष नेपालभरि आफ्ना ग्राहकहरूलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्ने नबिल कर्मचारीहरूको प्रयासबाट उत्पन्न भएको हो र यो अनुदान प्रत्येक नबिलियनको समर्पणको परिणाम हो
शाखा विस्तारमा आक्रामक बन्दै नबिल बैंक, यी हुन् काठमाण्डौ र
काठमाण्डौ । आक्रामक ढंगले बिजनेस ग्रोथ गरिरहेको नबिल बैंकले शाखा...
प्रभु बैंकद्वारा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङलाई प्राप्ति गर्ने
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेडले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड...
राष्ट्र बैंकको निर्देशन नेपाल बैंकले टेरेन, लगानीकर्तालाई
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमिटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन...
बैंक अफ काठमाण्डूको कामु सीईओमा श्रवण मास्के नियुक्त
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको कायम मुकायम प्रमुख...
नेपाल एसबीआई बैंकको नाफा घट्यो, वितरणयोग्य मुनाफा कति ?
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म नेपाल एसबीआई बैंकको...
अधिकांश सूचकमा ग्लोबल आइएमई बैंकको सन्तोषजनक प्रगति, नाफा रु.
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म...
सिद्धार्थ बैंकको नाफा रु. २.८३ अर्ब, वितरणयोग्य मुनाफा कति ?
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ बैंकले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म २...
चौथो त्रैमाससम्म यस्तो छ लक्ष्मी बैंकको वित्तीय अवस्था
काठमाण्डौ । लक्ष्मी बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो...